Android 10 yekuvandudza inosiya pixel nhare dzakagwamba pahoot skrini kwemaawa
Kuru Nhau & Ongororo Android 10 gadziriso inosiya mafoni ePixel akaomeswa nechando pachiratidziro chebhutsu kwemaawa
Iyo yazvino vhezheni yeApple, iyo inogumisa Google & apos; s dhizeti-themed yekupa zita chirongwa, iko zvino yave pakupedzisira kuburitsa kune varidzi vePixel mafoni kutenderera pasirese. Inongodaidzwa kuti Android 10, kuburitswa kwazvino kuzere zvitsva uye zvinonakidza maficha , asi hazviuye & apos; hazviuye pasina mamwe madiki matambudziko zvakare.
Paunenge uchiisa iyo Android 10 kugadzirisa, varidzi vazhinji veGoogle Pixel vakaita kuti zvishandiso zvavo zvimire pabhoot screen kwemaawa ekupedzisira. Kunyangwe paine saizi diki yeiyo OTA yekuvandudza, vamwe vashandisi vakashuma mu Google chigadzirwa maforamu kuti mafoni avo ePixel akange akanamira pachiratidziro chebhutsu kwemaawa anosvika matanhatu. Ehe, iwe unoverenga izvo chaizvo,nhanhatumaawa!
Iyo nyaya haina & apos; inoita kunge isinga ganhurirwe kune imwe modhi, Android Central mishumo, uye nyaya dzakataurwa nezvezvizvarwa zvese zvitatu zvePixel mafoni, kusanganisira iyo Pixel 3a, ichikanganiswa neyakareba nguva yekumisikidza. Vamwe vevashandisi vakakanganiswa vakataura nguva dzekumisikidza chero kupi kubva pamaminitsi makumi matatu kusvika paawa matanhatu.
Isu & maapos isu tato gadziridza imwe yedu yePixel 3a uye Pixel 2 zvikamu zvisina kana nyaya. Iyo Pixel 3a yakakurumidza kurodha pasi nekumisikidza iyo 1.2GB yekuvandudza, ndokupfuura nepakutanga bhuti kumusoro mushure mekuvandudza zvinoshamisa nekukurumidza. Iyo Pixel 2 yainonoka uye yakatora ingangoita maminetsi mashanu pane yekutanga bhuti kumusoro mushure meyekuvandudza, asi hapana nzvimbo padyo nenguva dzevamwe vashandisi vari kugunun'una pamusoro peGoogle & apos; s zvigadzirwa maforamu.
Isu parizvino hatina ruzivo nezve chii chingave chiri kukonzeresa zvakanyanyisa kureba nguva yekumisikidza, kana kuti nei vamwe vashandisi chete vachikanganiswa.
Kana iwe & apos; uchidzokorora yako Pixel foni kuenda kuApple 10 uye chishandiso chako chakanamatira pane bhuti skrini neGoogle logo, kubheja kwako kwakanyanya, zvinosuruvarisa, kuti umirire kunze. Google kusvika parizvino haina kupa mhinduro chaiyo kudambudziko, kana tsananguro, asi Google Chigadzirwa Chigadzirwa yapinda patambo, ichikurudzira vanhu kuti vangomirira. Imwe sarudzo ndeyekudzidzira kubatisa modhi kubva kuchando chando bhodhi (nekutsikirira chero vhoriyamu kumusoro kana pasi uye bhatani remagetsi panguva imwe chete) nekusarudzaReboot system izvozvi. Izvi zvinofanirwa kudzoreredza foni yako zvakare muApple Pie. Kubva ipapo, iwe unogona kuyedza kuisa iyo yekuvandudza zvakare kana kumirira kudzamara mhinduro iripo.
Nekudaro, Google inopa zano ichipesana nenzira yekupedzisira, se'kumanikidza kudzorerazve panguva ino kunogona kukanganisa mafaira izvo zvinogona kudzivirira foni kubhootazve,'Chigadzirwa Chigadzirwa chakatsanangura mune iyo tambo paGoogle & apos; s zvigadzirwa maforamu.
Isu & apos; takasvika kuGoogle uye tichagadzirisa nyaya iyi kana uye kana isu tikatambira chirevo chepamutemo nezvenyaya iyi.
Maitiro ekugadzira iyo Apple ID isina kiredhiti kadhi
GTA V iFruit app inozopedzisira yauya kuApple kana iwe uchida kudzidzisa Chop
Maitiro ekuwedzera uye kubvisa epamba skrini paApple (uchishandisa Google Zvino Launcher)
Nyowani Samsung 'ClockFace' app inowedzera makumi matatu masitayera eiyo Nguva Dzese-Inotaridza
Google Nexus 5 ongororo Q&A: isu tinopindura mibvunzo yako
Galaxy S8 Edge Mwenje yakagadziridzwa: iyo & apos; s ikozvino inotonhorera
Iwo mafoni ane simba kwazvo: akanakisa hupenyu hwebhatiri paMah